ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတစ်ယောက် လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတစ်ယောက် လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ
ဘေဘီလေးတစ်ယောက်ကို လူ့လောကထဲရောက်မလာခင်ကတည်းက ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသူတွေက မေမေတွေပါ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘေဘီလေးမွေးဖွားလာစေဖို့က ကိုယ်ဝန်စရှိချိန်မှာကတည်းက မေမေရော ဘေဘီလေးပါကျန်းမာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်စစ်ဆေးမှုတွေက မေမေတို့က သေချာလေးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါရစေ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတိုင်း လုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေက ဘာတွေများလဲ…….
ကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့စသိပြီဆိုတာနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ကာလ အပိုင်းအခြားကို ပထမ ၃ လပတ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁ ပတ်က နေ ၁၂ ပတ်အထိ)၊ ဒုတိယ ၃ လပတ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၃ ပတ် ကနေ ၂၆ ပတ်အထိ) နဲ့ တတိယ၃ လပတ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃၇ ပတ်ကနေ မွေးဖွားတဲ့အချိန်အထိ) ရယ်ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် အပတ်တိုင်းအလိုက်မှာ စစ်ဆေးရမယ့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကလည်း မနည်းပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၄ ပတ် ကနေ ၂၈ ပတ်အတွင်းမှာ ဆေးခန်းကို တစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်သွားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၂၈ ပတ်ကနေ ၃၆ ပတ်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဆေးခန်းကို ၁ လ ၂ ကြိမ် ပုံမှန်သွားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃၆ ပတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ အပတ်စဉ် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရပါမယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ ပထမဆုံးသွားတွေ့တဲ့အခါ ဘာတွေစစ်ကြမလဲ…..
ပထမဆုံး ဆေးခန်းသွားတဲ့အချိန်မှာ အရင်ဆုံး ဆရာဝန်က သွေးစစ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ မွေးဖွားမယ့်ရက်ကို တွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ရင်သားကိုစစ်ဆေးပေးပါမယ်။ သားအိမ်အနေအထားကို စစ်ပါမယ်။ သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုကို စစ်ဆေးဖို့ ဗိုက်ကို တိုင်းပါမယ်။
ဒါတွေစစ်ဆေးပြီးရင်တော့ ပုံမှန် လာရောက်ဆွေးနွေးရမယ့် ရက်တွေကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၂ ပတ်မှာ ဆီးစစ်ပြီး သွေးချိုနဲ့ ပရိုတင်းပမာဏကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့
ပထမကလေးက မွေးဖွားချိန်က ကိုယ်အလေးချိန် ၉ ပေါင်ကျော်နေမယ်
အဝလွန်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေများတာကြောင့် သေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု
ကလေးမှာ မွေးရာပါရောဂါပါလာနိုင်လားဆိုတာကို သိဖို့ မိဘနှစ်ယောက်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကို စစ်ရပါမယ်။ (ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက စစ်ထားလို့လည်းရပါတယ်) (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၂ ပတ်အတွင်း)
မိခင်သွေး Rh အမျိုးအစားကို စစ်ပါမယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၂ ပတ်အတွင်း)
သန္ဓေသား အနေအထားမှန်/မမှန် အာထရာဆောင်းရိုက်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၆ ပတ် ကနေ ၁၂ ပတ်)
မွေးရာပါရောဂါ ပါလားနိုင်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ သန္ဓေသားရဲ့ ခရိုမိုဆုမ်းစစ်ပါမယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၀ ပတ် ကနေ ၁၂ ပတ်အတွင်း)
ဘေဘီလေးမှာ Down Sydrome ပါလားနိုင်လားဆိုတာကို သိဖို့ သွေးစစ်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၁ ပတ် ကနေ ၁၆ ပတ်အတွင်း)
ကလေးကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရဲ့လားဆိုတာကို သိရှိဖို့ နဲ့ မွေးရာချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုပါလားနိုင်လားဆိုတာကို သိရဖို့ အာထရာဆောင်းရိုက်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၃ ပတ် ကနေ ၁၇ ပတ်အတွင်း)
ဘေဘီလေး ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရဲ့လားဆိုတာနဲ့ အချင်းအနေအထားမှန်ရဲ့လား ဆိုတာကို အာထရာဆောင်းရိုက်ပြီး စစ်ဆေးမယ် ( ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၆ ပတ် ကနေ အပတ် ၂၀ အတွင်း)
ဘေဘီလေးမှာ မွေးရာပါရောဂါတစ်ခုခုပါလားနိုင်လားဆိုတာကို ရေမြွှာရည် စစ်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၆ ပတ်နောက်ပိုင်း)
ကလေးအနေအထားမှန်/မမှန် နဲ့ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရဲ့လားဆိုတာကို အာထရာဆောင်းရိုက်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၉ ပတ် ကနေ ၂၅ ပတ်)
မေမေရော ဘေဘီလေးပါကျန်းမာရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးမှုလုပ်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလ ၃၇ ပတ်နောက်ပိုင်း)
သွေးအားနည်းရောဂါရှိနေလား၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရှိနေလားဆိုတာကို သွေးစစ်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၂၄ ပတ်ကနေ ၂၈ ပတ်အတွင်း)
သန္ဓေသားအနေအထား နဲ့ သန္ဓေသားပုံမှန်ကြီးထွားရဲ့လားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ အာထရာဆောင်းရိုက်မယ် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃၇ ပတ်နောက်ပိုင်း)
ဒါတွေအပြင် လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကြိုတင်ထိုလို့ မွေးလာမယ့် ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုရော မေမေကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ဂရုစိုက်လိုက်ရအောင်လား ဖေဖေမေမေ တို့ရေ…………..
ကိုယျဝနျဆောငျ မမေတေဈယောကျ လုပျသငျ့တဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား
ဘဘေီလေးတဈယောကျကို လူ့လောကထဲရောကျမလာခငျကတညျးက ဝမျးနဲ့လှယျပွီး အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွသူတှကေ မမေတှေပေါ။ ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ ဘဘေီလေးမှေးဖှားလာစဖေို့က ကိုယျဝနျစရှိခြိနျမှာကတညျးက မမေရေော ဘဘေီလေးပါကနျြးမာစဖေို့ လိုအပျတဲ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျစဈဆေးမှုတှကေ မမေတေို့က သခြောလေးလုပျဆောငျဖို့လိုပါမယျ။ ဒီတဈခေါကျတော့ ကိုယျဝနျဆောငျမမေတေိုငျးလုပျသငျ့တဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုလေးတှအေကွောငျး ပွောပွပေးပါရစေ။
ကိုယျဝနျဆောငျမမေတေိုငျး လုပျသငျ့တဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှကေ ဘာတှမြေားလဲ…….
ကိုယျဝနျရှိပွီလို့စသိပွီဆိုတာနဲ့ သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျပွသရပါမယျ။ ကိုယျဝနျကာလ အပိုငျးအခွားကို ပထမ ၃ လပတျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁ ပတျက နေ ၁၂ ပတျအထိ)၊ ဒုတိယ ၃ လပတျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၃ ပတျ ကနေ ၂၆ ပတျအထိ) နဲ့ တတိယ၃ လပတျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၃၇ ပတျကနေ မှေးဖှားတဲ့အခြိနျအထိ) ရယျဆိုပွီး ခှဲခွားထားပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ မမေတေဈယောကျအနနေဲ့ ကာလအပိုငျးအခွားအလိုကျ အပတျတိုငျးအလိုကျမှာ စဈဆေးရမယျ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှကေလညျး မနညျးပါဘူး။
ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၂၈ ပတျကနေ ၃၆ ပတျကာလအတှငျးမှာတော့ ဆေးခနျးကို ၁ လ ၂ ကွိမျ ပုံမှနျသှားရပါမယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၃၆ ပတျနောကျပိုငျးမှာတော့ အပတျစဉျ တဈပတျတဈကွိမျ ဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျတှဆေုံ့ရပါမယျ။
ပထမဆုံး ဆေးခနျးသှားတဲ့အခြိနျမှာ အရငျဆုံး ဆရာဝနျက သှေးစဈခိုငျးပါလိမျ့မယျ။ ပွီးရငျတော့ မှေးဖှားမယျ့ရကျကို တှကျပေးပါလိမျ့မယျ။ ပွီးရငျတော့ ရငျသားကိုစဈဆေးပေးပါမယျ။ သားအိမျအနအေထားကို စဈပါမယျ။ သားအိမျခေါငျးစဈဆေးမှုတှလေုပျဆောငျပေးပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၂ ပတျမှာ ဆီးစဈပွီး သှေးခြိုနဲ့ ပရိုတငျးပမာဏကို စဈဆေးပါလိမျ့မယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ကတော့
အဝလှနျနမေယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျဆောငျဆီးခြိုဖွဈနိုငျခွမြေားတာကွောငျ့ သခြောစဈဆေးဖို့လိုပါမယျ။
ကလေးမှာ မှေးရာပါရောဂါပါလာနိုငျလားဆိုတာကို သိဖို့ မိဘနှဈယောကျရဲ့ သှေးအမြိုးအစားကို စဈရပါမယျ။ (ကိုယျဝနျမဆောငျခငျကတညျးက စဈထားလို့လညျးရပါတယျ) (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၂ ပတျအတှငျး)
ဘဘေီလေး ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွော ကောငျးစှာဖှံ့ဖွိုးရဲ့လားဆိုတာနဲ့ အခငျြးအနအေထားမှနျရဲ့လား ဆိုတာကို အာထရာဆောငျးရိုကျပွီး စဈဆေးမယျ ( ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၆ ပတျ ကနေ အပတျ ၂၀ အတှငျး)
ဘဘေီလေးမှာ မှေးရာပါရောဂါတဈခုခုပါလားနိုငျလားဆိုတာကို ရမွှောရညျ စဈမယျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၆ ပတျနောကျပိုငျး)
ကလေးအနအေထားမှနျ/မမှနျ နဲ့ ကောငျးစှာဖှံ့ဖွိုးရဲ့လားဆိုတာကို အာထရာဆောငျးရိုကျမယျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၁၉ ပတျ ကနေ ၂၅ ပတျ)
သန်ဓသေားအနအေထား နဲ့ သန်ဓသေားပုံမှနျကွီးထှားရဲ့လားဆိုတာကို သိနိုငျဖို့ အာထရာဆောငျးရိုကျမယျ (ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၃၇ ပတျနောကျပိုငျး)
ဒါတှအေပွငျ လိုအပျတဲ့ ကာကှယျဆေးတှကေို ကွိုတငျထိုလို့ မှေးလာမယျ့ ဘဘေီလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးကိုရော မမေကေိုယျတိုငျရဲ့ ကနျြးမာရေးကိုပါ ဂရုစိုကျလိုကျရအောငျလား ဖဖေမေမေေ တို့ရေ…………..